Home » Lahatsoratra » Interviews » Ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Thailand
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Hotels & Resorts • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Interviews • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Naotin'i Resort • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Thailand
David Barrett, manam-pahaizana momba ny indostria
Manampahaizana manokana momba ny indostria sady mpivarotra haja David Barrett tamin'ny fifanakalozan-kevitra tamin'i Andrew J Wood momba ny fahasitranana ny vokatry ny Coronavirus amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany mahatahotra any Thailand.
💠Q1. Rehefa manomboka mipoitra avy any amin'ny hidin-trano i Thailand, inona no inoanao fa teboka manan-danja indrindra hodinihina mba hiantohana ny fahombiazana?
DB: Rehefa manomboka sitrana isika dia omena fotoana ahafahana mamerina ny maodely fizahan-tany any Thailandy ary manangana ho avy tsaratsara kokoa. Natsangana i Thailand ho fizahan-tany marobe ary raha te-hahita fitomboana maharitra sy fampandrosoana isika dia mila fanaraha-maso sy fitantanana tsara kokoa ny toerana sy loharano.
Mila mikendry ny tsena fandresena haingana avy amin'ny tsena loharano miboiboika akaikin'ny trano ho dingana voalohany isika. Ny fifantohana amin'ireo mpizahatany be vokatra dia ny làlana tokony hizorana, miaraka amin'ny famerenana ny fizahan-tany faobe, raha mahatsiaro ny filana mitantana tsara ny harenan'ilay Fanjakana, miaro ny tontolo iainana.
💠Q2. Rehefa manomboka mieritreritra ny dia indray ny olona, ​​inona no inoanao fa tadiavin'izy ireo ao amin'ny tontolon'ny Covid-19?
DB: Ny fepetra momba ny fiarovana ara-biolojika no ho lohalaharana amin'ireo mpivezivezy voalohany amin'ny dia iraisam-pirenena. Fanomezan-toky izay karakaraina ny fahasalaman'izy ireo sy ny fiadanany. Ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana dia mety hiteraka fahasahiranana kely raha oharina amin'ny fitsangatsanganana maimaim-poana alohan'ny COVID, fa misy fepetra vaovao mila hita maso hanomezana toky ireo mpandeha, satria ny fiarovana no zava-dehibe indrindra. Ny onjam-pivezivezena voalohany dia mety handray dingana zazakely, mizotra amin'ny firenena amin'ity taona ity, manidina amin'ny taona ho avy ao anatin'ny 4 ora ary manantena i longhaul fa hiakatra indray amin'ny 2022. Raha tapaka ny tongotrao ka eo am-piomanana ianao, tsy miditra marathon ianao. Ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany dia tapaka ary efa eo an-dalam-pamerenana izao, mila manao dingana kely akaikin'ny trano aloha isika.
💠Q3. Tamin'ny fitsapan-kevitra natao vao haingana, 75% amin'ireo namaly no nilaza fa ny indostrian'ny hotely any Thailand dia tsy afaka miroborobo raha tsy amin'ny fizahantany anatiny ihany. Manaiky izany ve ianao?
DB: Mila miantehitra sy miaina amin'ny fizahan-tany any an-toerana isika satria io no tsena voalohany mandeha. Soa ihany fa ny governemanta Royal Thai dia mahita ihany koa ny sehatra anatiny ho lakilen'ny fanombohana ny toekarem-pizahantany ary ny fonosana mandrisika 22.4 miliara baht miaraka amin'ny fanampiana sy famporisihana hanamafisana ny fizahan-tany any an-toerana dia fomba iray tokony haleha. Hitohy ho mpamily fitomboan'ny toekarena Thai ny fizahantany. Raha ny tantara dia ny mpitsidika iraisam-pirenena no nanosika ny indostria, saingy ny fanirian'ireo Thai ny hitety an'i Thailand no nahitana ny tsenan'ny fizahantany anatiny nitombo. Raha mijery ny iray amin'ireo fizarana misy anao ianao - fizahantany ara-tontolo iainana, mihoatra ny 60% amin'ireo mpandraharaha fizahantany eco kely any Thailand no manana tranonkala sy fiantohana fampiroboroboana ihany amin'ny fiteny Thai. Izany dia milaza zavatra momba ny fahombiazana taloha ary manosika hamerina ny fizahantany eto an-toerana ho toy ny fizarana voalohany. Aza miraharaha ny fizahan-tany any an-toerana amin'ny loza mety hitranga.
💠Q4. Ny anaranao dia matetika mifandray amin'ny indostria MICE. Miaraka amin'ny torolàlana momba ny lavitra eo amin'ny fiaraha-monina vaovao hametrahana fivoriana any Thailandy, mieritreritra ve ianao fa afaka miverina any Thailandy ity orinasa ity?
DB: hiverina i MICE. Na izany aza, raha manapaka ny fihodinana tsara rehetra ianao, ny zava-misy dia ny MICE iraisam-pirenena, izay fatra ambony kokoa noho ny fomban-drazana, dia haharitra ela kokoa vao hiverina. Manantena aho fa ny shorthaul MICE miaraka amin'i Singapore ho foibem-paritra itsinjaram-pahefana, ny fivorian'ny fivondronana any Thailandy, dia hiverina amin'ny telovolana fahatelo amin'ny 2021. Ny tsena Longhaul toa an'i Eropa sy ireo famporisihana avo lenta avy any Etazonia, dia nanomboka nandresy izahay tsy hiverina intsony mandra-pahatongan'ny tapaky ny taona 2022. Lalao miandry izany. Ny fanamby dia ho an'ireo DMC izay nanao banky ny ho aviny amin'ireto tsena maharitra ireto. Manana paosy lalina ve izy ireo hamakivakiana ity lalao fiandrasana ity? Betsaka amin'ireo DMC kely no nitodika tany amin'ny fivarotana ambongadiny mba hampiatoana azy ireo, saingy sahiran-tsaina momba ny fizotry ny fiverenan'ny orinasany.
Raha ny fahitana lavitra ny lavitra amin'ny hetsika ara-orinasa dia hifanaraka ny indostria ary hanomboka ny fahatokisana ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia azoko antoka fa ho maivamaivana ny torolàlana momba ny fahadiovana sy ny fahasalamana henjana. Ny faniriana hitsangatsangana sy hihaona amin'ny olona dia ao amin'ny ADN antsika, ary matoky aho fa hiverina hatrany amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID ny MICE, saingy mety haharitra 3 ka hatramin'ny 5 taona izany.
💠Q5. Ny PM Thai dia maniry ny hiara-miasa amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria. Inona no torohevitra momba ny dia sy fizahan-tany homenao azy?
DB: Azafady mba ampidiro ny fiaraha-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Atitany, izay manome lisansa hotely, sy ny Ministeran'ny fizahan-tany sy fanatanjahantena. Ny minisitera roa dia mila mifandray sy miara-miasa amin'ny fanaraha-maso ny fampandrosoana ny fizahantany any Thailand. Ary ataovy anaty resaka ihany koa ny minisiteran'ny harena voajanahary & tontolo iainana. Mila fifehezana sy fandrindrana tsaratsara kokoa ny loharanom-pahalalana fizahan-tany.
💠Q6. Betsaka ny resaka miresaka famerenana ny indostria. Inona araka ny eritreritrao no tokony hataontsika loha laharana?
DB: Famerenana ny indostria (1) Ampidiro am-pitandremana ny fifanarahan'ny governemanta roa tonta amin'ny dia, mba hahafahantsika manokatra tsena loharanom-baovao, na dia fanafoanana ny fameperana fidirana aza. (2) drafitra maoderina maharitra ho an'ny fizahan-tany Thai izay maharitra ho an'ny tontolo iainana sy ireo mpiara-miombon'antoka drafitra iray ividianan'ny tsirairay, na dia misy fifehezana mety hisy fiatraikany amin'ny asa ataon'ny orinasa aza. (3) Manohiza ny asan'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand amin'ny fampiroboroboana an'i Thailand ho toy ny vatosoa any Azia. Ary azafady azafady manana fampielezan-kevitra vaovao izahay ary mandatsaka ny "Mahagaga" izay nihazakazaka.
Momba an'i David Barrett
Tonga tany Thailandy i David tamin'ny taona 1988 rehefa nanana asa nahomby tamin'ny tsenan'ny fiantohana Lloyds of London. Nanao dia nanova fiainana izy nankany Asia, alohan'ny hamelezany ny 30, izay tonga tany Thailandy.
David Barrett dia liana amin'ny dia any Thailand sy ny tontolo iainana.
David dia nitana ny toeran'ny indostrian'ny fizahan-tany Thai amin'ny maha lehiben'ny Prestige Travel Consultants an'ireo Nineties voalohany nisolo tena an'i Cunard, Forte Hotels, Reed Travel ary niara-niasa tamin'ny British Tourist Authority. Izy avy eo no nitantana ny varotra sy varotra iraisam-pirenena an'ny Siam Express. Tamin'ny taona 1999 dia niditra tao amin'ny Diethelm Travel Group i David, nihetsi-jaza sy nitondra ny lohateny Diethelm Events nandritra ny 13 taona. Avy eo dia nitsambikina fefy izy ary niasa tao amin'ny ONYX Hospitality ho Tale Mpanatanteraka Event ho an'ny fananan'izy ireo roa amari Amari any Thailand - Amari Watergate sy Amari Pattaya. Taorian'ny dimy taona niarahana tamin'i Amari dia niditra an-tsehatra irery niaraka tamin'ny DBC Asia i David, niara-niasa tamin'ny hotely handroahana ny varotra MICE. Niara-niasa tamin'ny The Slate in Phuket, trano fandraisam-bahiny King Power, HLA Lifestyle Wellness Center any Yangon i David amin'izao fotoana izao ary portfolio'ny mpanjifa any Eropa.
David dia mpikambana ao amin'ny birao ary mpiara-mitarika amin'ny komity marketing ao amin'ny TICA nandritra ny taona maro, nitantana ny North Pattaya Alliance, mpikambana iray mpanorina ao amin'ny TIWA (Thai Indian Weddings Association), mpikambana taloha ao amin'ny SITE, ary ankehitriny dia mitarika ny MICE sy India Weddings vondrona miasa ao amin'ny Phuket Hotels Association.